Kala aragti duwanaanta Iiran iyo US - BBC Somali
Kala aragti duwanaanta Iiran iyo US
Image caption Hogaamiyayaal kala matalaya dhinacyada oo kulmay
Madaxwaynaha dalka Maraykanka Brack Obama ayaa sheegay in wali kala aragti wayn ay u dhaxayso dalka Iran iyo reer galbeedka farqigaasina waxaa weeye in heshiis laga gaaro xakamaynta Nukliyeerka ee Iiraan waxa uuna ka digay in ay macqluul tahay in aan heshiis la garin.
Ergooyinka ka kala socda Maraykanka, Midawga Yurub iyo Iiraan ayaa ku kulmaya Cumman si ay isugu dayaan in la yareeyo kala aragti duwanaanshahaasi laba todobaad kahor wakhtiga kamadambaysta ee loo qabtay in la gaadho heshiis ah in Iiraan aysan soosaarikarin hub Nukliyeer ah.
Heshiiska waxa uu u muuqdaa in uu xasaasi yahay. Saraakiisha sare ee ka qaybgalaysa waxa ay kala yihiin Xoghayaha arimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Javed Zarif iyo gabadha wadahadalada u qaabilsan Midawga Yurub Catherine Ashton, waxayna si toos ah uwadahadleen in kabadan shan saac, waxayna kulanka u hakiyeen si ay ula soo tashadaan ergadoodii kale.
Wadahadaladuna waxa ay sii socondoonaan manta, laakiin madaxwayne Obama waxa uu sheegay in farqiga u dhaxeeya uu aad u waynyahay ayna macquultahay in aan heshiis la gaadhin, waxa uu hadalkaasi u sheegay talefashin Maraykanka laga leeyahay.
Arrinta ugu adag waxa ay tahay, ilaa iyo heerka ay Iiraan bacriminkarto barnaamijkeeda Nukliyeerka iyo in wakhti loo cayimo xiliga cunaqabataynta laga qaadayo.
Obama waxa uu ku celiyay in ahmiyada ugu saraysa ay tahay in la xaqiijiyo in Iiraan aysan samaysanin hub Nukliyeer ah.
Fikradaasi waxa ay muhiimadeedu tahay in loo ogolaado in ay sii wadato hawlaheeda bacriminta loona ogolaado inay xadidaan oo ay u isticmaasho si nabad ah.
Iiraan waxa ay sheegtay in xaddiga loo qoondeeyay ay aad ooga hoosayso baahideeda.
Obama waxaa kale oo uu qiray in Iiraan iyo Maraykanku ay leeyihiin hal cadaw, kaasina uu yahay Malayshiyada Khilaafada Islaamka, laakiin waxa uu sheegay in aysan gacan ka gaysanaynin sidii loola dagaalami lahaa kooxdaasi. Arrintaas oo aan qayb ka ahayn wadahadalada arrimaha Nukliyeerka.